သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာေစာအိပ္ရာထေပးပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာေစာအိပ္ရာထေပးပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာေစာအိပ္ရာထေပးပါက ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
သငျ့ကနြျးမာရေးအတှကျ စောစောအိပျရာထပါ အိပျရာစောစောထတဲ့ သူတှဟော ညဉျ့နကျတဲ့အထိ အလုပျလုပျပွီး နမွေငျ့မှ အိပျရာထသူတှထေကျ ပိုမို ပြောျရှှငျကာ သှယျလြ ကနြျးမာကွကွောငျး လေ့လာမှု အတောျမြားမြားအရ သိရပါတယျ။ နံနကျ စောစောထတဲ့ သူတှကေ အလုပျမှာ ပိုမို စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးရှိပွီး အလုပျ တှငျကယြျတာကွောငျ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ဝငျငှေ ပိုကောငျးကွကွောငျး လေ့လာမှုတှကေ ဆိုပါတယျ။ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူတှေ ဆိုရငျလညျး အိပျရာ စောစောထကာ လေ့လာ မှတျသားမှု ပွုလုပျတဲ့အတှကျ နမွေငျ့မှ အိပျရာထသူတှထေကျ အမှတျပွညျ့ရနိုငျခွေ ပိုမြားကွောငျး တက်ကဆကျတက်ကသိုလျ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ နံနကျစောစော အိပျရာထသူတှကေ ပိုမိုကနြျးမာ ထကျမွကျရသလဲ ဆိုတဲ့အခကြျကို သိနိုငျဖို့ လေ့လာမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့အခါ အောကျပါ လြို့ဝှကျခကြျ ခွောကျရပျကို တှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။
အိပျရာ စောစောထသူတှကေ နေ့တစျနေ့ကို လေ့ကငြ့ျခနျးနဲ့ စတငျလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နမွေငျ့မှ အိပျရာထသူတှထေကျ စောစော အိပျရာထသူတှကေ တစျနေ့လုံး စိတျခံစားမှု ကောငျးမှနျ လနျးဆနျးနရေတာ ဖွစျပါတယျ။ ပုံမှနျ လေ့ကငြ့ျခနျး လုပျတာကွောငျ့ ဦးနှောကျထဲမှာ စိတျခံစားမှု ကောငျးစတေဲ့ အနဒေါျဖငျဓာတျ အထှကျ တိုးစပွေီး စှမျးအငျအဆငျ့ မွငျ့တကျစပေါတယျ။
စီမံခနျ့ခှဲနိုငျစှမျး ပိုမို ကောငျးမှနျခွငျး
လေ့လာမှု အသစျတစျရပျအရ ပမြျးမြှအားဖွငျ့ နမွေငျ့မှ အိပျရာထသူတှကေ နံနကျစောစော ထသူတှလေောကျ မှတျဉာဏျစှမျးအား မကောငျးကွကွောငျး သိရပါတယျ။ အရှယျရောကျသူ ၆၄၃၆ ဦးက အိပျစကျပုံ၊ စှမျးအငျအဆငျ့နဲ့ သညျးခံနိုငျစှမျးတို့အား လေ့လာ ကွညျ့ခဲ့တဲ့အခါ စောစော အိပျရာထသူတှကေ စှမျးအငျ ပိုမကောငျးမှနျကွပွီး ပွဿနာတှကေို အလှယျတကူ ဖွရှေငျးနိုငျကွကာ အရာရာကို တိတိကကြြ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျစှမျး ပိုမြားကွောငျး သိရပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျ မွငျ့တကျမှု နညျးခွငျး
သွစတွေးလရြဲ့ မွီးကောငျပေါကျစအရှယျ ၂၂၀၀ ဦးကို လေ့လာမှုတစျရပျအရ နမွေငျ့မှ အိပျရာထသူတှကေ စောစောအိပျ၊ စောစောထတတျသူတှထေကျ အဝလှနျနိုငျခွေ နှစျဆ ပိုမြားကွောငျး သိရပါတယျ။ ညဉျ့နကျတဲ့အထိ မအိပျဘဲ နတေဲ့အခါ ဆယျကြောျသကျတှကေ တီဗီ အလှနျအမငျး ကွညျ့ဖွစျပွီး ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု လုပျခြိနျ လြော့နညျးသှားတာကွောငျ့ ဖွစျပါတယျ။
အနောကျမွောကျ တက်ကသိုလျရဲ့လေ့လာမှုအရ ညဉျ့နကျမှ အိပျရာဝငျသူတှဟော စောစော အိပျရာထသူတှထေကျ တစျနေ့မှာ ၂၄၈ ကယျလိုရီ ပိုမို စားသုံးကွပွီး အဆငျသငျ့ အစာကို မြားမြား စားဖွစျကွကွောငျးနဲ့ သစျသီးနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို စားသုံးမှု နညျးကွကွောငျး သိရပါတယျ။ ညဉျ့နကျမှ အိပျရာဝငျကွသူတှရေဲ့ စားသောကျမှုပုံစံကကနြျးမာရေးနဲ့ ညီညှတျမှု မရှိတာကွောငျ့နဲ့ ညဘကျကမြှ အစာစားလေ့ရှိတဲ့ အကငြ့ျကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ BMI က မွငျ့မားနကွေကွောငျး လေ့လာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
ပိုမို ပြောျရှှငျမှု ရရှိကွခွငျး
အမရေိကနျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဂြာနယျရဲ့ လတျတလော လေ့လာမှုတစျရပျအရ စောစော အိပျရာထသူတှကေ နမွေငျ့မှ အိပျရာ ထတတျသူတှထေကျ ပိုမိုပြောျရှှငျကွကွောငျး သိရပါတယျ။ တခွား လေ့လာမှုအသစျအရ အိပျရာ စောစောထတဲ့ အသကျကွီးသူတှကေ အိပျရာ စောစောထတဲ့ လူငယျတှထေကျ ပိုမို ပြောျရှှငျတကျကွှမှု ရှိကွကွောငျး ဆိုပါတယျ။ အသကျ ၆၀ အရှယျမှာ အသကျကွီးသူ ၇ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ညဘကျ တောျတောျနဲ့ အိပျမပြောျတတျသူတှေ ဖွစျနပေါတယျ။
ကနြျးမာရေး ပိုမို ကောငျးမှနျခွငျး
နံနကျ စောစော အိပျရာထသူတှကေ နမွေငျ့တဲ့အထိ အိပျစကျတတျသူတှထေကျ ကနြျးမာရေး ပိုမို ကောငျးမှနျကွပါတယျ။ စောစော အိပျရာထတာကွောငျ့ စိတျခံစားမှု တကျကွှကာ လနျးဆနျးမှုရှိပွီး ကိုယျခံစှမျးအား စနစျကို ကောငျးမှနျစတေဲ့အတှကျ ကနြျးမာရတာပါလို့ လေ့လာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။ စောစော အိပျရာထသူတှကေ လေ့ကငြ့ျခနျးလုပျဖို့ အခြိနျရသလို နံနကျစာကို ကောငျးကောငျး စားဖွစျတာကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး ခံနိုငျရညျ ရှိတတျကွပါတယျ။